Anyị enweghị ntụkwasiobi na kọmiti nnyocha INEC-ICSCO – hoo!haa!!
Anyị enweghị ntụkwasiobi na kọmiti nnyocha INEC-ICSCO
Enugwu: Otu Igbo Civil Society Coalition bụ otu jikọtara ndị gbanụ gbanụ n’ala Igbo ekwuola na ha enweghị ntụkwasị obi na kọmiti nnyocha nke Ụlọ ọrụ Ime Nhọpụta bụ INEC guzobere maka inyocha ebubo idebanye aha ndi etorughi etoru.
N’ozi nke ha weputara mgbe ha mechara ọgbakọ izugbe kwa ọnwa na ngwụcha izu ụka gara aga n’Enugwu, otu a kwuru sị: ” Anyị enweghị ntụkwasị obi ọbụla na kọmiti nnyocha nke INEC guzobere inyocha ebubo e boro ha nke idebanye aha ndi na-etorughi etoru maka isoro mee nhọpụta. Nke mbụ, INEC enweghi ike iji aka n’ekpe onwe ya ikpe”
N’ozi ahụ nke ndi tinyere aka na ya bụ Ọkammụta Ọbasị Igwe, Onye Nlekọta nakwa Mazị Ikechukwu Bismarck Ọjị, Onye Ọkpọ-Ọgbakọ katọkwara etu INEC ejighi
Onye Nlekọta otu, Mazi Ikechukwu Bismarck Oji, kwara arịrị na President Muhammadu Buhari ka na-agakwa n’ihu na-akpachapụ Ndigbo n’ike ọkwa ọbụla na gọọmentị ya.
Ọ sị n’agbanyeghị na agwara ya ka ọ gbanwee, ihe na-ebe ka na-ebekwa.
Onye ji ọkwa “national coordinator” otu a bụ Ọkammuta Obasi Igwe kwuru na oge eruola mgbe Ndigbo ga-ejikọ aka onụ napụta oke ruru ha.
Ndi otu a katọrọ ogbugbu ndị na-achị ehi na-egbu ndị mmadụ n’ala anyị, ma gwa gọọmentị na oge eruola ijide ndị niile na-akpa ike ọjọọ a, ma taa ha ahụhụ dịka iwu obodo sịrị kwuo.
Ndị bịara na ya bụ nzụkọ otu Igbo Civil Society Coalition (ICSC) bụ ndị isi otu ndị ọzọ na-ahụ maka ọnọdụ Ndigbo na Naịjirịa.
Bismark Oji kwuru na ndị otu ha niile amalitela izisa ozi n’ala Igbo niile ka ndị mmadụ gaa nweta akwụkwọ ntuliaka bụ PVC maka ntuliaka nke na-abịa n’ọnwa ole na ole.
Ozi ha wepụtara na-ekwukwa na ha adịla njikere ịgba gọọmentị Buhari na otu ọchịchị APC akwụkwọ maka ụdịrị ntaramahụhụ ụmụ Naịjirịa nọ n’ime, ogbugbu ndị na-achị ehi na egbu ndị mmadụ, nakwa mmegbu ha na-emegbu Ndigbo.
Previous Post: Ndi Agha Naịjiriya jụrụ ime ihe ọbụla maka ọgbụgba ama ha nwetara na Dapchi
Next Post: Ụmụnwaanyị emeela ngagharị iwe maka achụmanọrụ Globacom